fandrosoana – Blaogin'i Voniary
Catégorie : fandrosoana
100startups – mpandraharaha fito vaovao hotohanana
Rehefa vita ny fanombanana tamin’ny sabotsy 13 Aprily lasa teo dia mpandraharaha fito no voaray hisitraka ny fanampiana sy ny fanohanana avy amin’ny 100startups. Ny fizotry ny fanombanana Tamin’ny volana Novambra 2018 no nanatanteraka ny fanaikana tetikasa ny 100startups. Rehefa nandalo sivana ireo mpandraharaha nandefa ny antotan-taratasiny dia folo tamin’izy ireo no voafantina niatrika ity... Lire la Suite →
Zava-dehibe ny fahaiza-mamorona amin’izao vaninandro iainantsika izao mba iavahana amin’ny besinimaro. Maneho izany indrindra ity hetsika nokarakarain’ny 100startups sy Passion 4 Humanity ity, mitondra ny anarana hoe « The Red Shalk ». Ny tanjona dia ny mba hampiroboroboana ny fandraharahana izay fantatra fa andry iankinan’ny fandrosoan’ny firenena iray. Notanterahina ny tontolo andron’ny sabotsy 30 Martsa lasa teo... Lire la Suite →
Antoky ny fandrosoana ny fitiavan-tanindrazana
Aoka isika tsy ho voafitaka, tsy resaka kajikajy ekonomika fotsiny no mitondra any amin’ny fandrosoana. Tsy maintsy latsa-paka ao anatintsika ny fitiavan-tanindrazana ary asehontsika amin’ny fihetsika farany izay bitika indrindra, vao hiroso amin’ny tena fandrosoana isika. Tsy maintsy entanin’ny fihetseham-po iraisana isika Malagasy rehetra vao afaka miara-mandroso. Matoa mitotongana toy izao ny firenentsika na dia... Lire la Suite →
Ho avy mamiratra ho an’i Madagasikara
Loabary andasy nahafinaritra sy nahavelom-panantenana tokoa ilay mikasika ny “Ho avin’i Madagasikara” nokarakarain’ny banky iraisam-pirenena tamin’ny 28 Martsa 2018 teo. Anisan’ireo nanatrika tao ny tenako ary velom-bolo tokoa satria tsapa fa samy te hampandroso ny fireneny avokoa na ny tanora na ny lehibe ary tsy resaka toe-karena ihany ny fandrosoana fa mifandray amin’ny sosialy, ny... Lire la Suite →
Raha raisinao ho tanin-janaka koa fa tsy tanindrazana fotsiny i Madagasikara dia hiova ny toe-tsainao. Fantaro fa izay fihetsika ataonao rehetra, na tsara io na ratsy dia hisy fiantraikany amin’ny taranaka any aoriana. Singanina indrindra eto ny lafiny fanajana sy fikolokoloana ny tontolo iainana. Mambole hazo, hajao ny fahadiovana, aza dorana ny ala dia mba... Lire la Suite →
FIRY ISAN-JATON’NY MALAGASY NO SAMBATRA ?
Any Bhoutan, 55% ny mponina no mahatsapa fa tena sambatra ary 11% monja no mahatsiaro mijaly araka ny antontan’isa tamin’ny 2010. Any amin’io firenena io manko ny FAHASAMBARANA FAOBE (Bonheur National Brut) no andrefesany ny fandrosoana fa tsy ny harin-karena faobe. Io no entiny mamaritra ny politikam-pandrosoana rehetra ary hita fa mahomby hatramin’izao. Aiza ho... Lire la Suite →
13 octobre 2016	 0